CNC အီလက်ထရောနစ် | အီလက်ထရောနစ်အပိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်း - အက်ဆေး
နေအိမ်> လျှောက်လွှာ> CNC အီလက်ထရောနစ်
တရုတ်နိုင်ငံ၏အီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်သည်ဆက်လက်ကျယ်ပြန့်စွာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးအတော်အတန်ပြည့်စုံသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအထောက်အကူပြုအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားစာရင်းအင်းဗျူရို၏အဆိုအရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်လုပ်ငန်း၏ရောင်းအားသည်ယွမ် ၁၅.၄ ထရီလီယံရှိခဲ့ပြီး ၁၀.၄ ရာခိုင်နှုန်းကျော်တိုးတက်ခဲ့သည်။ သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားထက်တရုတ်နိုင်ငံ၏အီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းသည်ရောင်းအားတန်ဖိုးယွမ် ၁၁၃,၂၉၄.၆၀ ဘီလီယံရှိခဲ့ပြီး ၉.၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့သည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောဆားကစ်များကဲ့သို့သောအဓိကထုတ်ကုန်များ၏ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးသည် ၁.၈၁ ဘီလီယံနှင့် ၁၀၈.၇၂ ဘီလီယံအသီးသီးရှိခဲ့ရာမှတစ်နှစ်လျှင် ၇.၈% နှင့် ၇.၁% တိုးတက်ခဲ့သည် လက်ကိုင်ဖုန်းများ၊ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများနှင့်တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများကဲ့သို့စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များ၏ထုတ်လုပ်မှုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှု၏ ၅၀% ကျော်ရှိသည်။
၁။ အရောင်နှစ်ရောင်ဆေးထိုးထိန်းချုပ်မှုယူနစ်တုန့်ပြန်ချက် - switching point များလွန်းခြင်း၊ ဆူညံမှုနှောင့်ယှက်ခြင်း၊ မတည်ငြိမ်သော command output နှင့်မတည်ငြိမ်သောအပူချိန်။
၂။ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၏ဆူညံသံ - မတည်ငြိမ်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ အဆို့ရှင်အနေအထားအရည်အသွေး၊ hysteresis၊
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်များရှိကွဲပြားခြားနားမှုများ - ရေနံဖျံများအတွင်းပိုင်းယိုစိမ့်ခြင်း၊ damping၊ ပွတ်တိုက်အားကွဲပြားမှု
၁။ Carbonization သည်ဆေးထိုးဖိအား၊ အဆင့်ပေါင်းစုံသော deceleration injection နှင့်မှိုထားသောလေဟာနယ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
၂။ ငွေပုံစံသည်ပလတ်စတစ်အမှုန်များအားလုံးခန်းခြောက်စေသည်။ နောက်ပြန်ဖိအားကိုတိုးမြင့်စေသည်၊ အရည်ပျော်အပူချိန်ကိုလျှော့ချပေးသည်။
၃။ ပူဖောင်းများ - နောက်ပြန်ဖိအားကိုတိုးမြှင့်၊ အရည်ပျော်သောအပူချိန်ကိုလျှော့ချပါ၊ ဂိတ်တံခါးသို့မဟုတ်အပြေးသမား၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ရန် dehumidifier dryer ကိုသုံးပါ။
4. လိုင်း - တိုးမြှင့်အရည်ပျော်အပူချိန်, ဖြည့်မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အိပ်ဇောနှင့်မှိုအပူချိန်တိုးမြှင့်။
5. စုစုပေါင်းအမြတ် - တိုးညှပ်အင်အားစု, အဆာဖိအားလျှော့ချခြင်းနှင့်အရည်ပျော်အပူချိန်ကိုလျှော့ချ။
6. ယူနီဖောင်းအထူဒီဇိုင်းကိုချုံ့, ဖိအားနှင့်အချိန်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးမှုအဆို့ရှင်ကိုအစားထိုး။
Headlamp Plastic Tube Kit Design နှင့်ပတ်သက်သောအမေးများသောမေးခွန်းများ
1. အဆိုပါ screw နှစ်ခုပျင်းရိကြသည်မဟုတ်။
2. ဝက်အူများအတွက်လိုအပ်သော torque ကိုလှည့်ရန်ကြီးမားလွန်းသည်။
ပလပ်စတစ် 5. မညီမညာဖြစ်နေသောရောစပ်။
ပလပ်စတစ်ဝက်အူပစ္စည်းပြွန်အုပ်စုသည်ဆေးထိုးပုံသွန်းစက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပလတ်စတစ်ကုန်ကြမ်းများကိုသယ်ဆောင်ရန်၊ အရည်ပျော်ရန်၊ ရောနှောရန်နှင့်တိုင်းတာရန်အတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်, ပလပ်စတစ်ဝက်အူဟာပုံသွင်းထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြုပြင်ထားသောပလပ်စတစ် screw နှစ်ခု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များမှာ -
taillights များအတွက်ဒီဇိုင်း screw နှစ်ခုအာရုံစိုက်ပါ
1. L / D ကိုအချိုး: 21-23 ။
4. အရောင်နှစ်ရောင်ဆေးထိုးချုံ့မှုအချိုး - ၂: ၃; အစာကျွေးခြင်းအပိုင်း - ၅၀% ခန့်၊ compression အပိုင်း: 30% ခန့်; မီတာအပိုင်း: အကြောင်းကို 20% ။
ရှေ့: CNC ဆေးစက်
နောက်တစ်ခု - အစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်